Karazana kristaly: endrika sy rafitra
Ny endriny sy ny firafitry ny kristaly
Tsy misy fomba iray hafa hibaiko kristaly iray. Ny fomba roa mahazatra indrindra dia ny mikambana azy ireo araka ny rafitra kristaly ary mamolavola azy ireo araka ny toetra voajanahary / ara-batana.
Fiakaran'ny vondron'antsy (loko)
Misy rafitra fito vita amin'ny kristaly kristaly.
Cubic na Isometric : Tsy toy ny kibay foana izy ireo. Hahita ihany koa octahedrons (tarehy valo) sy dodecahedron (tarehy 10).
Tetragonal : Tahaka ny kilaometatra kobay, fa maharitra ela kokoa noho ny iray hafa, ireo kristaly ireo dia mamorona piramida roa sy prisma.
Ny orthôhôbika : Toy ny kristaly tetragonal afa-tsy ny tsy voatery eny an-tsisin-tseranana (rehefa mijery ny kristaly eo amin'ny farany), ireo kristaly ireo dia manangona prisma na dipyramida ( pyramida roa mifamory miaraka).
Hexagonal: Rehefa mijery ny endriky ny kristaly ianao, ny fizaham-pitenenana dia prisma na seza enina enina.
Trigonal: Ireo kristaly manana tokotokony tokana miavosa telo ampifanampiana raha tokony ho ny andaniny 6-valo amin'ny fizarana hexagonal.
Triclinic: Ireo kristaly ireo dia tsy mifangaro amin'ny lafiny iray amin'ny iray hafa, izay mety hitarika amin'ny endriny hafa hafahafa.
Monoklinika: Ny kristaly nohadinoina, dia miteraka prisma sy piramida roa ireo kristaly ireo.
Izany dia fomba fijery malalaka amin'ny rafitra kristaly . Ankoatra izany, ny ravina dia mety ho voalohany (tampony iray fotsiny ny teboka iray isaky ny sela tokana) na tsy voalohany (maromaro kokoa ny teboka iray isaky ny sela).
Ny fampifandraisana ireo rafitra crystals 7 amin'ny karazana laka 2 dia manome ny 14 Bravais Lattices (nomena ny Auguste Bravais, izay niasa tamin'ny rafitra fitambarana tamin'ny taona 1850).
Misy karazany efatra ny kristaly, arakaraka ny vondron'olona simika sy ara-batana .
Ny kristaly kivalana dia manana fifandraisana marina marina eo amin'ny atôma rehetra ao amin'ny kristaly. Azonao atao ny mihevitra ny kristaly iray kovalentina ho molekila lehibe iray . Maro ny kristaly kivalana manana teboka avo be. Ohatra avy amin'ny kristaly kovalentaly ny diamondra sy ny sinkida kristaly zinc.
Ny singam-bao metaly tsirairay avy amin'ny metaly kristaly dia mipetraka amin'ny toeram-ponenana. Izany dia mamela ny elanelana ivelany avy amin'ireo atôma afaka mivezivezy manodidina ny voaly. Ny kristaly metaly dia matevina be ary manana teboka avo.
Ny atôma amin'ny kristaly ionika dia miara-miasa amin'ny hery elektrôzika (fatorana ionika). Ny krizy Ionic dia sarotra ary manana teboka avo lenta. Ny sira sira (NaCl) dia ohatra iray amin'ny karazana kristaly.
Ireo kristaly ireo dia ahitana molekiola azo tsapaina ao anatin'ny rafitra misy azy ireo. Ny kristaly molekiola dia miara-miasa amin'ny fifandraisana tsy misy kovalent, toy ny van der Waals forces na ny fatoran'ny rano . Ny vatan'ny molecular dia mihamalemy miaraka amin'ny tebiteby mivaingana. Ny vatomamy vatokely , ny endriky ny siramamy tabilao na ny sucrose, dia ohatra amin'ny molekiolan'ny kristaly.
Tahaka ny amin'ny rafitra fantsom-baravarankely, ity rafitra ity dia tsy tapaka tanteraka. Indraindray sarotra ny mamaritra ny kristaly ho an'ny kilasy iray mifanohitra amin'ny iray hafa. Na izany aza, ireo vondrona marobe ireo dia hanome anao fahatakarana momba ny rafitra.
Fantaro ny lalana mora indrindra hahazoana Solon-tsolika 0.1 M solifara
Ahoana ny fiasan'ny Sarin Gas
Alchimie sy ny dikany
Inona no fahasamihafana eo amin'ny fepetra sy ny fepetra takiana?
Fandiniham-bava amin'ny fikarohana siantifika
Metaly, nonmetals, metalsoids Worksheet
Ahoana no fomba handefasana Celsius ho an'ny fahaleovan-tena
Mampangotraka ny riaka amin'ny haavo ve ny orana?
Hezekia - Mpanjakan'ny Joda nahomby
Inona ny Federasionan'i Rhodesia sy Nyasaland?
Bodista sy firaisana
'Review Robinson Crusoe'
Ny fipoahan'ny volkano any Krakatoa
Fahatakarana ny ampahany amin'ny Art
Tena manana bibikely miaina ao anaty felanao ve ianao?
Tazony ny fombafomba fambolena Lammas
Ny fomba tokony hitondran'ny mpampianatra "Student Lazy"
Ny adiresy momba ny fanjakana any avaratr'i Missouri
Ireo 12 mampihetsi-po indrindra amin'ny tantara Hip-Hop
Fomba ahoana no hipoitra amin'ny wakeboard
Tantaran'asa momba ny tantara sy ny style of Jeet Kune Do
Soraty ny karazana Shinoa mampiasa Pinyin sy Phonetic Input Method
Catherine avy ao amin'ny Facts Aragon
Fitsarana Tampony - Everson v. Board of Education
SAT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny Fihaonambe lehibe 12
Ahoana ny fametrahana lalao mahjongana